Runyerekupe rweiyo iPhone 7 256GB inoenderera ichiwana simba | IPhone nhau
Iyo 7GB iPhone 256 runyerekupe inoramba ichiwana traction
Zvingave sei neimwe nzira, pakati peguhwa iro riri kusvika kwatiri nezve iyo iPhone 7 kune vamwe vatinoda uye vamwe vatisingade zvakanyanya. Imwe yeayo atinoda ndiko kubviswa kungangoitika kweiyo 16GB modhi kugadzira nzira yeiyo 32GB modhi, asi zvakare kusvika kwemuenzaniso wevashandisi vanonyanya kuda avo vangave nekwanisi yekuchengetedza 256GB.
Imwe nguva yapfuura, iyo yechiChinese yepakati MyDrives uye neChina kambani TrendForce vakatiudza nezve mukana wekuti Apple ichavhura iyo 256GB iPhone. Zvino, DigiTimes zvakare inovimbisa zvakafanana, ichidonongodza mune ino kesi indasitiri masosi. Kunyangwe iri svikiro riine chikamu chakasanganiswa chebudiriro muzvifungidziro zvaro, chokwadi chekuti vatove vatatu vanovimbisa zvinoita sechikonzero chakatokwana chekuti tifunge nezve chirevo chinoti "Kana rwizi ruchirira, mvura inotakura".
Iyo iPhone 7 inogona kusvika ne256GB
NAND vatengesi vechiedza vanokwidza mutengo wechip nekuda kwesimba rakasimba remafoni nyowani, kunyanya iyo iPhone 7 iyo inosanganisira 256GB yekuchengetedza, sekureva kwemaindasitiri masosi. Mitengo icharamba ichikwira kusvika mukota yekupedzisira ya2016.
Paive nerunyerekupe rwakavimbisa kuti iyo nyowani yekuchengetera ichave yakawedzera kakapetwa kana tichiwedzera huwandu, ndiko kuti, sekutaura kwatamboita, yekuisa modhi ingave iri 32GB, nepo vamwe vaviri vaizove ne128GB uye 256GB ivo vari protagonists veichi posvo.
Kunyangwe ichiita seichiwedzera kuwedzera kuti kuchave ne iPhone ine 256GB yekuchengetera, masosi haaite pachena kana kugona kwacho kuchizowanikwa mune ese ari mairi 4.7-inch modhi uye iyo iPhone 7 Plus. Iyo mukana yeiyo iyo 256GB inongowanikwa yeiyo 5.5-inch modhi. Semazuva ese, kujekesa kusahadzika chero kupi isu tinogona kungomirira kuratidzwa kwepamutemo kwemhando nyowani, chimwe chinhu chichaitika mukati memavhiki matatu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo 7GB iPhone 256 runyerekupe inoramba ichiwana traction
Mitambo mitatu, yemahara kwenguva yakatarwa, kune vadiki vari mumba